युनाइटेडको नजरमा नेमार, छोड्लान् त पीएसजी ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalयुनाइटेडको नजरमा नेमार, छोड्लान् त पीएसजी ?
Home खेलकुद युनाइटेडको नजरमा नेमार, छोड्लान् त पीएसजी ?
युनाइटेडको नजरमा नेमार, छोड्लान् त पीएसजी ?
फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) का ब्राजिलियन सुपरस्टार नेमार अहिले घाइते छन् । खुट्टाको चोटका कारण अझै दुई महिना मैदान बाहिर रहने नेमारको ट्रान्सफर चर्चा भने दिन प्रतिदिन चुलिएको छ ।
केही समयअघि बार्सिलोना फर्कने दावी गरिएका नेमार एक साता अघि स्पेनि क्लब रियल म्याड्रिड जान लागेको अर्को हल्ला चल्यो । नेमार बार्सिलोना फर्कने कुरा सत्य नभएको विषयमा बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले हालै स्पस्ट पारेका थिए ।
नेमारलाई अहिले इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाईटेडले अनुबन्धको प्रस्ताव अघि सारेको समाचार फेरि बाहिर आएको छ । युनाइटेडले नेमारलाई अनुबन्ध गर्न कीर्तिमानी दुई सय ६२ मिलियन पाउन्डको प्रस्ताव गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामले उल्लेख गरेको छ ।
समाचार अनुसार युनाइटेडका अन्तरिम प्रशिक्षक ओले गनर सोल्सारले आगामी सिजन नेमारलाई क्लबमा ल्याउन चाहेका छन् । गत साता मात्र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा पीएसजीले युनाइटेडलाई २–० गोलले हराएको थियो ।
नेमार दुईबर्ष अघि बार्सिलोनाबाट कीर्तिमानी रकममा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) गएका थिए । पीएसजीमा नेमार त्यति रम्न नसकेको समाचार बारम्बार आईरहेका छन् ।
युनाइटेडले आँखामा परेका नेमारलाई स्पेनिस क्लब रियलले भित्र्याउने तयारी गरेको समाचार पनि बाहिर आइरहेको छ । घाइते नेमार अहिले घरमै आराम गरिरहेकोले उनलाई आगामी सिजन कसले अनुबन्ध गर्छ, त्यो भने समयले बताउँनेछ ।